कसरी विन्डोज 10 को लागि भर्चुअल मिसिन स्थापना गर्न?
शायद, आधुनिक कम्प्युटर प्रणाली को धेरै प्रयोगकर्ताहरू भर्चुअल मिसिन को अवधारणा संग सामना गर्नुपरेको थियो। सबै तथापि, यो के हो थाहा र आवश्यक किन। हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उदाहरण यो व्याख्या गर्न प्रयास गरौं भर्चुअल मिसिन यो आफ्नो स्थापना र सिर्जनाको लागि सामान्य नियम को एक संक्षिप्त सिंहावलोकन दिनेछु विन्डोज 10 को लागि, सबै थप त सबैभन्दा भाग लागि, उनि लगभग समान छन्। त्यसैले यो प्रश्न कुनै एक कार्यक्रम मा आधारित हुन सक्छ विचार गर्नुहोस्।
विन्डोज 10 को लागि भर्चुअल मेसिनको के हो?
हामी विचार बस यति बोल्न, एक सरल र सुलभ भाषा, को दृष्टिकोणबाट यो अवधारणा हेर्न प्राविधिक नियम र काम को सिद्धान्त को ठूलो संख्या जाने।
भर्चुअल मिसिन विन्डोज 10 को लागि, तथापि, यो परिवार मा अन्य सञ्चालन प्रणाली लागि रूपमा, एउटा वास्तविक कम्प्युटर अनुकरण, तर केवल भर्चुअल विमान मा गर्न सक्ने एक विशेष सफ्टवेयर छ। कि शारीरिक कम्प्युटर, यसको "फलाम" र सफ्टवेयर घटक सबै हराएको छ, छ, तर यसको भर्चुअल कपी को रूप मा सिस्टम मा प्रतिनिधित्व छ।
यो शारीरिक हात भेला कम्प्युटर टर्मिनलहरु को प्रकार को लागि आवश्यक विन्यास सङ्कलन गर्न सक्छन् जो विवरण छ जो एक निर्माता, गर्न केहि पनि त्यस्तै हो। अर्को शब्दमा, उदाहरणका लागि, Windows 10 x64 लागि भर्चुअल मेसिनको सिर्जना 32- वा 64-बिट कम्प्युटरमा प्रणाली CPU को एक विशेष प्रकार, राम को राशि संग स्मृति भर्चुअल हार्ड डिस्क, वा भिडियो ग्राफिक्सएडप्टर, र यति मा। डी, र यो सेट कुनै पनि "OSes" "दसौं" भन्दा अन्य (तर कम से कम लिनक्स वा म्याक ओएस एक्स)।
हामी कार्यक्रम कुरा भने, विन्डोज 10 को लागि भर्चुअल मेसिनको छ, आज एकदम धेरै पाउन सकिन्छ। यस्तो Oracle VirtualBox (वा Innotek VitrualBox), एमएस भर्चुअल पीसी, VMware कार्य केन्द्र रूपमा तथापि, सबै भन्दा साधारण र व्यावहारिक सकिन्छ उत्पादनहरु।
त्यो भर्चुअल कम्प्युटर प्रणाली सिर्जना प्रक्रिया मा प्रयोग गरिनेछ, यो कुरा छैन। एक Windows 10 आधारभूत सबै सिद्धान्तहरूमा अवास्तविक मेशिन को स्थापना धेरै समान छन् भन्ने तथ्यलाई। मतभेद मात्र केही विशिष्ट nuances बताउन सक्नुहुन्छ।
कसरी विन्डोज 10 मा अवास्तविक मेशिन सिर्जना गर्न: सामान्य नियम
सामान्य मा, अवास्तविक मेशिन सिर्जना प्रक्रिया आपसमा लगभग समान छन् जो केही आधारभूत कदम सामेल छन्। तर, तेस्रो-पक्ष कार्यक्रम को मामला प्रश्न, निर्णय हुनेछ प्रयोगकर्ता प्रयोग मा "कसरी म अवास्तविक मेशिन एक Windows 10 मा स्थापना गर्नुहुन्छ?"
र सबैलाई किन अतिरिक्त सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ भने मा धेरै "शीर्ष दस" एक निर्मित मोड्युल, भनिन्छ जो हाइपर-वी पहिले नै छ? गर्न। तपाईं अन्य विशिष्ट आवेदन बिना गर्न सक्छन् सबै पछि, यो विन्डोज 10 धेरै छरितो छ लागि, भर्चुअल मिसिन सिर्जना गर्न टी छ।। र यी प्रक्रियाहरु केही मा एकदम भ्रामक हुन सक्छ।
एक कार्यक्रम वा मोड्युल सक्रियता स्थापना नामकरण र भर्चुअल डिस्क को एक स्थान अठोट स्मृति मापदण्डहरू सिर्जना र अन्य "हार्डवेयर" घटक र अतिथि अपरेटिङ सिस्टम को स्थापना: अर्कोतर्फ, हामी केही आधारभूत कदम याद गर्नुहोस्। त्यहाँ एक कार्यक्रम को सबै अर्थ वर्णन, त्यसैले भेद हाइपर-वी मोड्युल को संलग्नता केन्द्रित छ।
पूर्व समावेश हाइपर-वी सम्मिलित ग्राहक
एकैचोटि भन्न: हाइपर-वी मोड्युल मात्र "दसौं» प्रो र उद्यम को संस्करण मा उपस्थित छ। अन्य संस्करण मा छैन। पूर्वनिर्धारित सबै स्तर मा कम्प्युटर प्रणाली संसाधन प्रयोग गर्न ताकि, बन्द गरिएको छ। यसलाई समावेश गर्नुपर्छ।
यो जहाँ विन्डोज मेनु चयन गरिएको छ "कन्ट्रोल प्यानल", मा कार्यक्रम र सुविधाहरू अन्तर्गत लग गर्न आवश्यक हुनेछ। यो केवल मोड्युल नाम अगाडि चेक मार्क राख्छ। हामी सेवा सक्रिय सम्म केही मिनेट पर्खनुहोस् छ छौँ। कि पछि, रिबुट प्रणाली गरिनेछ, त्यसपछि घटक «हाइपर-वी प्रबन्धक" प्रशासन खण्ड देखा हुनेछ। यसले आफ्नो सेटिङहरू लागू गर्न रहिरहन्छ विन्डोज 10 को लागि हाम्रो भर्चुअल मिसिन छ।
भर्चुअल स्विच सिर्जना
उपयुक्त व्यवस्थापकमा प्रवेश मा पहिलो भर्चुअल स्विच सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यो, खैर, विन्डोज 10 को लागि भर्चुअल मिसिन तेस्रो-पक्ष कार्यक्रम प्रयोग गरि सिर्जना र हाइपर-वी मोड्युल फरक। तिनीहरू केवल धेरै "मूल" मोड्युल को मामला मा मात्र स्थिति complicates कि दर्शाउन यद्यपि, यस्तो सम्भावना छैन।
यद्यपि, यो तपाईं इन्टरनेट जडान कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ स्विच छ। यसैले, "प्रबन्धक" सुरू गर्न र कम्प्युटर नाममा क्लिक गर्नुहोस् र भर्चुअल स्विच लागि मोड्युल चयन गर्नुहोस्। , बाह्य आन्तरिक र निजी: यहाँ तीन प्रकारका छन्। यो पहिलो विकल्प (प्रयोग गरिने चयन गर्न राम्रो छ सञ्जाल कार्ड वा वाइफाइ)। त्यसपछि, बटन सिर्जना प्रेस, स्विच को नाम सोध्न इच्छित जडान प्रकार चयन गर्नुहोस् र "लागू गर्नुहोस्" बटन रोजगार।
अवास्तविक मेशिन बनाउन मुख्य चरणमा
अब तपाईं मिसिन नै गर्न सक्नुहुन्छ। यो नै "प्रबन्धक हाइपर-वी सही अवास्तविक मेशिन सिर्जना गर्न मेनु आदेश चयन गर्न जो» प्रयोग गर्दछ। पहिलो चरणमा, अन्य सबै कार्यक्रम जस्तै, हार्ड ड्राइभ वा तार्किक विभाजन मा नाम र स्थान निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
यो विकल्प को पुस्ता पछि छ। यो UEFI- काम गर्छ पनि थप सुविधाहरू एक नम्बर छ र, तर 32-बिट प्रणाली स्थापना समर्थन गर्दैन धेरै विशेषज्ञहरु, उत्तरार्द्ध चयन गर्न सल्लाह। एउटै पहिलो पुस्ता संग 32- र 64-बिट प्रणाली राम्रो copes, तर UEFI- समर्थन गर्दैन, त्यसैले तपाईं निर्णय।
अतिरेक स्मृति, तर4जीबी मा भौतिक "राम" को उपस्थिति र पट्टी माथिको उठाएर सकिन्छ (अन्य विपरीत, अझै मोड्युल "घर", यहाँ स्वतः इष्टतम प्यारामिटर निर्धारण संचालित) अपरिवर्तित बायाँ गर्न सकिन्छ। यो स्मृति विस्तार गतिशील रूप प्रयोग गर्न उचित छ। यो मुख्य सिस्टम को प्रदर्शन असर गर्न सक्छ।
निम्न सञ्जाल सेटिङहरू विन्डो, को चयन ड्रप-डाउन सूची स्विच द्वारा सिर्जना, र त्यसपछि तपाईँको हार्ड ड्राइभमा अनावश्यक मा एक स्थान निर्दिष्ट गर्नुहोस्। कि पछि अग्रिम मा माउन्ट छविको स्थान संकेत र सिस्टम स्थापना र बटन "समाप्त" क्लिक गर्न अपेक्षा गरिएको छ।
मा "प्रबन्धक हाइपर-वी» सिर्जना समर्पित अवास्तविक मेशिन प्रयोग गरेर सक्रिय र उपयुक्त आदेश फैलिनु गर्न। कि पछि, प्यानल हरियो बटन क्लिक गर्नुहोस्। प्रणाली तपाईं कुनै पनि कुञ्जी प्रेस, र त्यसपछि गर्न सक्रिय र सामान्य मोडमा अतिथि OSes स्थापना हुनेछ उत्प्रेरित गर्छ।
virtualization BIOS खोल्दै
तर सबै छ। तपाईं BIOS मा virtualization समावेश छैन भने, विन्डोज 10 को लागि भर्चुअल मिसिन सेट अप x64 वा x32 वा काम हुन सक्छ।
यस BIOS सेटअप प्रविष्ट गर्न यो घटक प्रणाली सुरुआतमा गर्न पूर्व सक्रिय (सामान्यतया डेल कुञ्जी, F2, F12, र यति मा। डी), अनि त्यसपछि खण्ड (उन्नत) विकसित सेटिङमा जानुहोस्।
त्यहाँ Virtualization प्रौद्योगिकी जस्तै रेखा हो। पूर्वनिर्धारित, यो घटक (असक्षम प्यारामिटर यो काम तोकिएको) असक्षम गरिएको छ। हामी सक्षम यसलाई परिवर्तन र BIOS बचत परिवर्तनहरू बाहिर निस्कन (नियम, प्रमुख F10 - बचत र सेटअप निकास)। भर्चुअल मिसिन रिबुट पछि कुनै पनि प्रतिबन्ध बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सिद्धान्त मा, BIOS लोड गर्दा थप जाँच उपकरणहरू भर्चुअल मिसिन नै सक्षम गर्न संवाददाता प्यारामिटर खण्डमा। तर यो त सिर्फ मामला मा, बोल्न छ।
कसरी ग्राफिकल सम्पादक प्रयोग गरेर छवि देखि लेबल हटाउन?
कसरी iPhone संगीत डाउनलोड गर्न
सबै तपाईं 1 C बारेमा जान्नु आवश्यक छ
कसरी एक टर्की खाना पकाउनु: सुझावहरू पकाउने साईट
साइप्रियनको हिसाब गुणहरू। अनुप्रयोग
कसरी दानव सुन्दर आकर्षित गर्न?
यो उपयोगी धमकी दिन अन्डा छ? तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
नाम कसरी परिवर्तन गर्ने?
स्वादिष्ट र स्वस्थ रक्सी रातो